Fanatanjahantena kilasy 25 tsy tafiditra ao amin'ny fandaharan'asan'ny Olympika
Isan-taona dia maro ny "fanatontoloana tsy fantatra" no mifaninana amin'ny zo hipoitra amin'ny Lalao Olaimpika. Mba hahatongavana amin'ny fandaharan'asan'ny hetsika fanatanjahantena tena manan-danja, mila mampihatra sy miandry ny fankatoavan'ny komisiona ianao.
Ity farany, mazava ho azy, tsy afaka mahazo ianao, fa lehibe loatra ny fakam-panahy hidina any amin'ny tantara. Ary ireo fanatanjahantena 25 ireo dia manantena ny hahazo vintana!
Io no iray amin'ny fanatanjahantena malaza manerana izao tontolo izao, satria manana ny lanjany rehetra izy. Alefaso imailaka amin ny namana endriny atao pirinty Fitantaràna hafa momba ny Afrika Avaratra & Proche Orient Tohin'ny lahatsoratra Tohin'ny lahatsoratra Tohin'ny lahatsoratra Tohin'ny lahatsoratra Atombohy ny resaka
Nahoana ianao no afaka mandingana haingana amin'ny haavo, fa tsy amin'ny fahavaratra? Ny tsy marim-pototra, izay mila manitsy haingana.
Fanatanjahan-tena mahavariana izany, maninona no tsy faly amin'ny mpijery?
Ny fifaninanana eo an-toerana dia natao manerana izao tontolo izao, ary ireo mpilalao baolina kitra no afaka manangona vola be.
Aza mihomehy atsy ho atsy, fa eritrereto hoe: raha ny marina, ny parkour dia karazana gymnastique. Ary midika izany fa izy no toerana ao amin'ny Lalao Olaimpika.
Ny fototry ny lalao dia ny misoroka ny mpifanandrina mba handripaka ny baolina fingotra, ka handefa azy any amin'ny famelezana fitsarana. Nanandrana nampiroborobo ny fanatanjahantena tao amin'ny Lalao Olaimpika ao Rio ny Federasion'ny Fiadanana Eran-tany, saingy tsy nahomby. Eny, ireo mpilalao baolina kitra ireo dia maharitra ary tena tsy hilavo lefona mihitsy!
Fanatanjahan-tena iray hafa mahaliana sy mahaliana. Fampitomboana fahavaratra mandritra ny lohataona. Indrisy, nandritra ny 2020, efa nolavina izy, saingy tsy izany no Lalao Olaimpika farany.
8. Ny famonoana
Tsaroanao ve ny fialamboly hatramin'ny fahazazany? Mba handresenao ity lalao ity dia tokony ho tena tompon'andraikitra amin'ny asa tanana ianao.
9. Football football
Eny, angamba ity no tsy fanatanjahan-tena indrindra ... fa manandrana, tsy manana traikefa, handresy!
Ny fandinihana ireo mpilalao amin'ny billiards dia mahaliana kokoa noho ireo mpankafy baolina fandaka.
Ny fahadisoana dia ireo izay tsy mihevitra ny hala-jaza ho fanatanjahantena. Fanatanjahan-tena mahaliana izany. Angamba tsy ny mahavariana indrindra, fa na izany aza, tsy misy olona mangataka 100% amin'ny fampitaovana mivantana mankany amin'ny antoko matanjaka.
12. The Polands
Ity dia karazana fanatanjahan-tena eo an-dalam-pandrenesana, saingy ny dihy eo amin'ny pylon dia mety hanangana ny fanombohan'ny Lalao Olaimpika ... Ny fampielezam-peo lehibe hametrahana ny fotoana manaraka - rehefa efa natory daholo ny ankizy.
Ambonin'ny ahi-maitso - fasika malefaka. Noterena mafy tamin'ny Lalao Olaimpika tao Rio ny baolina kitra, saingy tsy nahomby, ary mitohy ny tolona.
Io baolina kitra io ihany, izay nentina teo amin'ny tokotanim-borona iray ihany sy tamin'ny endrika kely kokoa. Izany dia mamerina ny tantaran'ny baolina kitra amin'ny tora-pasika ary tsy hilavo lefona koa.
Ho an'ireo atleta matihanina, ny drakitra dia efa nitsahatra tsy ho fotoana fialan-tsasatra.
Ity fanatanjahantena ity dia noforonina tany Eorôpa. Mety ho toa mampidi-doza ny fiaramanidina ririnina amin'ny sasany, fa ny sasany kosa mihevitra fa ny freestyle na ny fifaninanana ara-barotra, ohatra.
17. Miaramila Martial mixed
Toa mendrika ny toerana eo amin'ny Lalao Olaimpika ny fitsipi-pifehezana fahiny. Ny fanatanjahantena dia mampahatsiahy ny ady totohondry, amin'ny ady irery ihany dia afaka mampiasa teknika samihafa.
Ity hockey hockey ity dia hevitra tsara ho an'ny Lalao Olaimpika.
Ny foto-kevitry ny lalao dia kely toy ny an'ny tsipika bowling, saingy hafa ny fitsipika. Ny baolina dia mila mihodina eo amin'ny lavaka tsy misy ala ary akaikin'ny baolina hafa.
20. Ice Climbing
Ho an'ny ankamaroan'ny olona, ​​dia toa tsy azo atao ny mitongilana sy ny vato mahazatra, fa tsy toy ny ranomandry mihetsiketsika. Ary ho an'ny olona iray dia fanatanjahantena fotsiny izany.
Tian'ny rehetra ny mijery "Dancing with the Stars", maninona no tsy mijery ny mpandihy sy ny lalao Olaimpika?!
Ny mpilalao dia mifaninana tsirairay ary miezaka ny mandresy ny elanelana amin'ny fanipazana ilay disk ny fotoana kely indrindra. Ny Komity Olaimpika dia efa nanaiky izany ho fanatanjahantena ofisialy, mbola mitoetra ho fampiroboroboana ny lalao Olaimpika, ary efa vonona.
Ny fampisehoana ny ekipa mpandidy dia tena mahafinaritra. Ny vondrona fanohanana dia manomana tarehimarika miaraka amin'ny dihy goavam-be sy singa henjana. Satria ny safidin'ny cheerleading dia azo antoka fa antsoina hoe mendrika ho an'ny Lalao Olaimpika.
24. Tovovavy ondry
Maro ireo tantsaha no resy lahatra fa io dia iray hafa amin'ny fanatanjahan-tena ary dia faly mandray anjara amin'ny Lalao Olaimpika mba hampifangaroana ny fandraharahana amin'ny fahafinaretana.
25. Football amerikana
Raha vantany vao nisolo tena tamin'ny Lalao Olaimpika izy, ary ireo mpankafy ara-panatanjahantena dia te-hahita azy indray amin'ny fifaninanana indray.
16 antony tsy hiditra amin'ny fanatanjahantena
Ireo toetra 5 tena manan-danja indrindra amin'ny fitiliana amin'ny 2017
Atleta 10 avy amin'ny Forbes lisitra miaraka amin'ny fidiram-bola lehibe indrindra isan-taona
Ny mpampianatra yoga 99 taona dia mizara tsiambaratelo telo momba ny faharetana
18 antso madinidinika amin'ny vatanao izay malaza amin'ny Internet
Ny vidin'ny fahombiazana: 12 ireo atleta no naneho fa miafina ao ambadiky ny fandresena izy ireo ...
Fomba tsotra hanombohana sakafo
12 vokatra mirakitra fanaintainana matavy
Inona ny pataloha amin'ny lamaody amin'ny taona 2014?
Inona no ilainao hanokafana orinasa?
Mofomamy avy amin'ny fety
Fialam-boly mankalaza fitsingerenan'ny andro nahaterahana?
Defender ny Andron'ny firenena - ny tantaran'ny fialantsasatra
Ny orinasa Kylie Jenner dia nangalatra ny hevitry ny dokambarotra avy amin'i Vlad Haggerti
Hareza amin'ny sahan-tsolika - fananana medikaly
Fanampiana fanampiny ho an'ny fampinono
Ahoana ny fomba hananana fiaramanidina ho an'ny ankizy?
Dysplasia amin'ny alika - soritr'aretina
Azu avy any turkey
Salady avy amin'ny katsaka sy mimamo
Inona no nofinofin'ny soavaly?
Kaviar kaviar amin'ny mayonnaise amin'ny ririnina